Abavelisi abanokuboliswa ziintsholongwane kunye nababoneleli - China iMveliso yeZinto ezinokubolayo
Isikhongozelo seCandelo esiBini seStarch sokutya
Iplastikhi yombona yenziwe nge-polylactic acid (i-PLA), eyinto ebambeleyo yeplastiki, eyenziwe ngesitatshi sesityalo esinotyiweyo. Iba yindawo ethandwayo endaweni yeplastikhi yendabuko, ethathwe kwimichiza esekwe kwipetroleum.Iinkalo zembewu Ukusetyenziswa okungafaniyo kwe-asidi ye-polylactic kunokuba yindlela yokunciphisa umkhondo wekhabhoni oshiywe ziiplastikhi zepetroli.
Iplate yokutya enokuboliswa ziintsholongwane enokutshiswa ngombala
Ukupakishwa kwePolystyrene akukwazi ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kwaye kuya kufuneka kulahlwe kwindawo yokulahla inkunkuma. Ke ngoko, sijonge ukusebenzisa izinto zokubopha ezinokuphinda zisebenze kunye nezinokuboliswa ziintsholongwane apho kunokwenzeka. Izinto zokupakisha ezisekwe kwisitatshi, imveliso inokuboliswa ziintsholongwane kodwa ayisiyonto iphantsi xa kuthelekiswa nezinto zokwenziwa zepolymer. Iplate yokutya enokuBoliswa yintsholongwane ayenziwanga kuphela ngesitashi sengqolowa, kodwa ikwayiyo etafileni elahlwayo eyenziwe ziitapile, irayisi isitatshi kunye netapioca isitashi.
I-PBAT PLA Flat evulekileyo enokuboliswa ziintsholongwane
Ukusetyenziswa okwandayo kwezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane zePBAT PLA Flat Open Bag kuthetha ukuba kukho umdla ongakumbi ekusebenziseni izixhobo ezisekwe kwizinto eziphilayo (ezihlaziyiweyo) ukwenza ezi mveliso, nangona kunjalo, okwangoku akukho mithetho ifuna ukuba abavelisi beplastikhi babhengeze ubukho bezixhobo ezinokuhlaziywa ngaphakathi imveliso. Nangona kunjalo, kukho indlela yovavanyo yaseYurophu, echaza indlela yokubala yokumisela umxholo wekhabhoni esekwe kwi-monomers, iipolymers kunye nezinto zeplastiki kunye neemveliso, esekwe kumlinganiso womxholo we-14C.
I-PBAT PLA enokuboliswa ziintsholongwane
Inkunkuma yeplastiki iveliswa kwihlabathi liphela; Inkunkuma yeplastiki yeyona ndawo inkunkuma yolwandle. Ukuphendula koku, umzi mveliso weplastikhi unikezela ngentengiso kwiindidi ezintsha zeepolymers ezinokuboliswa ziintsholongwane ezijongwa ngabaninzi njengokunikezela ngeendlela ezizezinye 'ezinobungqongileyo kokusingqongileyo' kwiipholima zesintu; Nangona kunjalo, kukho uluhlu oludidayo lwesigama kunye neepropathi ezinxulumene nazo. Kwaye sinokubonelela ngombhobho onokuboliswa ziintsholongwane we-PBAT PLA Cornstarch Shopping Bag ukusombulula ingxaki yenkunkuma.
PLA Spoons Knives Fork Cakewareware
I-PLA Spoons Knives Fork Cutlery Tableware yenziwe nge-PLA, eluhlobo lweplastikhi eziluhlaza ezenziwe ngezixhobo zezityalo ezihlaziyekayo, ezinokuphelisa ukuxhomekeka kwioyile, kwaye zinokubola kwezinto kunye nokubhidlika kwemvelo. Inokubola ibe yicarbon dioxide kunye namanzi kwindalo esingqongileyo, kwaye ayizukungcolisa imeko-bume. Ke ngoko, izinto zePLA zinamathuba abanzi ophuhliso.